ငါရို့ ဇာဖြစ်လို့ သူများတိ နောက်မှာ ကျန်ခလေ? | Great Arakan
Home Blogs ငါရို့ ဇာဖြစ်လို့ သူများတိ နောက်မှာ ကျန်ခလေ?
(စကားဦး – အဂုတင်ပြဖို့အကြောင်းအရာစွာ ပြိုဂြတ်ဆဲ့ဖ်လို့ခေါ်ရေ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကို အခြေခံပနာ၊ တခုကိုလည်း မခြွင်းမချန်ဘဲ၊ ဒဲ့ဒိုး သုံးသပ်လားဖို့စွာ ဖြစ်တေအတွက် လူတိုင်း လက်ခံချင်မှ လက်ခံနိုင်ပါဖို့။ ကိုယ့်စွာကို ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင် သုံးသပ်ပြီးမှရာ လက်ခံကတ်ပါ။ အဓိက ဦးတည်ချက်က ရခိုင်လူမျိုးတိ ပိုကောင်းမွန်ရေ လူ့ဘဝ ရသင့်စွာကို သုံးသပ်လားဖို့စွာပါ။)
ရခိုင်ပြည်ကို ထားဖိ။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်တောင် ကဗာမှာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတိထဲမှာ ရှိနိန်ရေ။ ဘလောက်ထိ ဆင်းရဲလဲဆိုကေ အချေခါ ပုံတိ မြင်ဖူးရေ နံရိုးပပြိုင်းနဲ့ အငတ်ဘေးကြုံလို့ ပိန်လီနိန်ရေ လူတိနိန်ရေ၊ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအောက် ၁၀ နိုင်ငံလောက် အဆင့်မှာ စီးပွားရေးအရ ရောက်နိန်ရေ။ အကြီးဆုံး ပြဿနာက အေနိုင်ငံစွာ အဆင်းရဲဆုံး အနိန်အထားက လွတ်မြောက်ဖို့ ရှိမှာ အလားအလာ မရှိဆိုစွာကို လက်ရှိ နိုင်ငံဦးတည်နိန်ရေ လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ပနာ သိနိုင်ရေ။
ရခိုင်လူမျိုးတိ ကဗာကြီး နောက်မှာ ကကောင်းပြတ်ကျန်ခဗျာလ်ဆိုစွာကို သတိထားမိကတ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ လက်ခံနိုင်ကတ်ဖို့လည်း မထင်ပါ။ ယင်းအတွက် ပီပီပြင်ပြင် မြင်အောင် ချမ်းသာရေ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ပုံမှန် လူတယောက်ဘဝကို အယင်ဆုံး နမူနာပီးပြပါမယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ အသက် ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီးရေ အလုပ်သမားတယောက် ၁ နာရီ လုပ်စာကို ၈.၇၂ ပေါင် ပီးရဖို့လို့ ဧပြီလ ၁ ရက် ၂၀၂၀ မှာ အစိုးရက ထပ်သတ်မှတ်ထားပါရေ။ ယင်း ၁ နာရီ လုပ်စာစွာ ဘလောက်ထိ တန်ဖိုးရှိပနာ၊ ဇာတိ ဝယ်လို့ ရလေဆိုစွာကို မြင်နိုင်အောင် အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
ပြင်ဗြီးသား ကြက်ချေ ၃ ကောင်ကို ၈ ပေါင်၊ ကြက် ၁ ကောင်လုံး ကင်ထားစွာကို ၃.၅ ပေါင်၊ နွားနို့အစစ် ၂ လီတာကို ၁.၈၅ ပေါင်၊ အာလူ ၃.၅ ကီလိုကို ၂ ပေါင်။ အေလောက်ဆိုကေ လူ ၁ ယောက် ၁ နာရီ အလုပ် လုပ်ကေ မိသားစုကို ဇာလောက်ထိ ကျွေးနိုင်ဗျာလ်လဲဆိုစွာကို သတိထားမိကတ်ပါလိမ့်မေ။
လူ ၁ ယောက်ရာ ၁ လကို ပေါင် ၁,၅၀၀ လောက် ရှာနိုင်ဖို့ဆိုကေ၊ ဇာတိ ဝယ်နိုင်လဲဆိုစွာ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ကတ်ပါမေ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် Nissan Note ကား ၁ စီးကို ဖေသာ တခါတည်း ပီးဝယ်ဖို့ဆိုကေ၊ ၄,၄၉၉ ပေါင်၊ လစဉ် အရစ်ကျ ပီးဝယ်ဖို့ဆိုကေ ၁ လကို ၆၅.၈၉ ပေါင်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် BMW 1 Series ဝယ်စီးဖို့ဆိုကေ အဗြီးပီး ၇,၄၉၉ ပေါင်၊ လစဉ် အရစ်ကျပီးဖို့ဆိုကေ ၁ လကို ၁၄၅.၃၄ ပေါင်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထုတ် Mercedes A Series ဝယ်စီးဖို့ဆိုကေ၊ အကျီပီး ၁၀,၉၉၉ ပေါင်၊ လစဉ်အရစ်ကျပီး ၁၆၄.၀၇ ပေါင်။
နောက်ထပ် ၆၅ လက်မ Samsung 4K UHD ၁ လုံးကို အဗြီးပီး ၆၄၇.၉၇ ပေါင်၊ လစဉ်အရစ်ကျပီး ၃၁.၁၀ ပေါင်။ HP Core i5 Laptop ၁ လုံးကို အဗြီးပီး ၇၁၉.၉၇ ပေါင်၊ လစဉ် အရစ်ကျပီး ၂၄.၆၀ ပေါင်။ Samsung ရခဲတိုက်တာ ၁ လုံးကို အဗြီးပီး ၈၂၉.၉၇ ပေါင်၊ အရစ်ကျပီး ၂၈.၃၆ ပေါင်။
အေလောက်ဆိုကေ လစဉ် ပုံမှန် အလုပ် လုပ်နိန်ရေ လူ ၁ ယောက်၊ ဇာကားတိ ဝယ်စီးနိုင်လဲ၊ ဇာပစ္စည်းတိ ဝယ်စုနိုင်လဲဆိုစွာ သတိထားမိကတ်ပါလိမ့်မေ။
အိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုကေလည်း မြို့အလိုက် စျီးကွာခြားပနာ ပျမ်းမျှ အိမ် ၁ လုံးကို ၂၂၂,၉၀၀ ပေါင် ရှိဗျာလ်၊ လစဉ် အရစ်ကျပီးဖို့ဆိုကေ ပျမ်းမျှ ၁ လကို ပေါင် ၄၅၀ ဝန်းကျင်လောက် ပီးရပါလိမ့်မေ။ (အိမ်ဆိုကေ လက်ရှိ အင်္ဂလန်က အိမ်စံထားကို မှီရေ အိမ်မျိုး၊ ရခိုင်ပြည်မှာ မရှိပါ။ ရာသီဥုတုဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင်၊ အပြင်မှာ အပူချိန် သူည ဒီဂရီစန်တီဂရိတ် ရှိနိန်ရေအချိန်မှာ၊ အပူပီးစက် မဖွင့်ဘဲ အိမ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ၁၂ ဒီဂရီစန်တီဂရိတ် ရှိနိန်အောင် နံရံတိကို တည်ဆောက်ထားပါရေ။ အိမ်ထဲမှာ အငွေ့ရိုက်စွာ၊ မိုးစိုစွာမျိုး မရှိပါ။ အိမ်တန်းခါး၊ ပဒင်းတိကို ပိတ်ထားကေ အိမ်အထက်က လီယာဉ်ပျံ ဖြတ်လားရေ အသံကိုတောင် သတိထားနားထောင်မှ သိနိုင်ပါရေ။)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ၁ နှစ် ဝင်ငွေ ၁၂,၀၀၀ ပေါင် ဝင်ရေ လူတိုင်း အခွန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက စ,ဆောင်ရပါရေ။ အလုပ် မရှိ၊ ဖေသာ မရှာနိုင်ရေ လူတိ အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးကို ယူလို့ ရပါရေ။ အချေတိုင်း အထက်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်ပါရေ။ နိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အလကား ရပါရေ။
အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ ရခိုင်သားတိနန့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတိ လူ့ဘဝကို ရလာစွာချင်း အတူတူ၊ ကြိုးစားကတ်ရစွာချင်း အတူတူ၊ ရလာရေ ဘဝရလာဒ်ကျကေ ဘလောက်ကွာခြားလားလေဆိုစွာ သတိထားမိကတ်ဖို့ ထင်ပါရေ။ ရခိုင်လူမျိုးတိ ကဗာကြီးနောက်မှာ ဘလောက် ကျန်နိန်ခဗျာလ်လဲဆိုစွာ သတိထားမိကတ်ပါလိမ့်မေ။
အဂုမှ ရခိုင်လူမျိုးတိ ဇာဖြစ်လို့ လူများနောက်မှာ ကျန်ခလဲဆိုစွာကို သုံးသပ်ပြပါမေ။
ရခိုင်သားတိနန့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာခြားမှု မရှိပါ။ ဉာဏ်ရည် ကွာခြားမှု မရှိပါ။ အဓိက ကွာခြားချက်က တွေးခေါ်ကတ်တေ ပုံစံပါ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတိက လက်တွိလုပ်ရပ်က ရလာရေ အတွေးအခေါ် (scientific advice)ကို အခြေခံပါရေ။ ဇာလုပ်လုပ် အသေးစိတ် လက်တွိလုပ် လေ့လာပနာ၊ စာနန့် မှတ်တမ်းတင်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ကဗာမှာ ထင်ရှားရေ ဇာအကြောင်းအရာမဆို အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတိ မှတ်တမ်း မတင်ထားစွာ၊ မရှိသလောက်ပါ။ သက်သီ အထောက်အထား မရှိဘဲ၊ မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်ကတ်စွာမျိုး မရှိပါ။ မသေချာ၊ မရေရာဘဲ ကံကျ လုပ်တေ ဆိုစွာမျိုး မရှိသလောက်ပါ။ မဟုတ်စွာ လုပ်ပနာ၊ ကိုယ့်စွာကို ပြန်ဖြေသိမ့်ကတ်လေ့ မရှိပါ။ အမှားကို တာဝန်ယူတတ်ကတ်ပါရေ။ အမှားကို ခွင့်လွတ်တတ်ကတ်ပါရေ။ လူ့သဘာဝ အမှားကို ကြီးမားရေ ပြစ်မှုလို့ မမြင်တတ်ကတ်ပါ။ မရှိရေ ကိုယ်ကျင့်တရားကို လူများအထင်ကြီးအောင် ဟန်ဆောင်ကတ်လေ့ မရှိပါ။
ရခိုင်လူမျိုး အများစုက မိရိုးဖလာအတိုင်း၊ မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်မှုကို လက်စွဲကိုင်ထားကတ်တုန်းပါ။ သက်သီမရှိရေ လက်ဆင့်ကမ်းစကားတိနန့် ကိုယ့်စွာကိုယ် နပန်းလုံးယင်း ဘဝထဲမှာ မွန်းနိန်ကတ်တုန်းပါ။
လက်တွိကျရေ လူ့ဖြစ်စဉ်ကို နားလည်ဖို့အတွက်၊ ကဗာကြီး ဖြစ်စဉ်ကို အကြမ်းဖျင်း သိဖို့ လိုပါရေ။ ရုပ်ဝတ္ထုရှိရေ အရာတိုင်းကို ကာဘွင်အမှုန်တိနန့် တည်ဆောက်ထားပါရေ။ ကာဘွင်အမှုန်တမှုန်စွာ နှစ်ပေါင်း ၅,၇၃၀ ကြာတိုင်း တဝက်စီ ပျက်စီးလားပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ရုပ်ဝတ္ထုတိမှာ ကြွင်းကျန်ခရေ ကာဘွင်တိကို ကြည့်ပနာ၊ ယင်းရုပ်ဝတ္ထုတိ သက်တမ်းကို တွက်ကြည့်လို့ရပါရေ(Radiocarbon dating (also referred to as carbon dating or carbon-14 dating))။ ယင်းပိုင် တွက်ကြည့်ရေခါ နီကို ဗဟိုပြုပနာ ဖွဲ့စည်းထားရေ ဂြိုလ်အုပ်စု(Solar System) ဖြစ်လာရေ သက်တမ်းက နှစ်သန်းပေါင်း ၄၅၆၈ ပါ။ နီကို ဗဟိုပြုပနာ ပတ်နိန်ကတ်တေ ဂြိုလ် ၈ လုံးမှာ ကဗာကြီးက ဂိုလ်ဒီလော့ဆ် ဇုန်(Goldilocks Zone)လို့ ခေါ်ရေ ကကောင်း မပူ၊ ကကောင်း မအီးရေ နိန်ရာမှာ ရောက်နိန်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ကဗာကြီးမှာ သက်ရှိတိ ဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါရေ။ ကဗာကြီး ရှိက နီနန့် ကပ်နိန်ရေ ဂြိုလ် ၂ လုံးမှာ နီအပူရှိန် ကကောင်း ဟပ်တေအတွက်၊ ကကောင်း ပူပနာ ရီ မရှိနိုင်ပါ။ ရီ မရှိလို့ သက်ရှိတိ၊ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကဗာကြီး နောက်က ဂြိုလ် ၅ လုံးမှာလည်း နီနန့် ဝီးလီ အီးလီ ဖြစ်တေအတွက်၊ သက်ရှိတိ ဖြစ်ဖို့ ကကောင်း ခက်ခဲနိုင်ပါရေ။
ယလောက် ကကောင်း မပူမအီး နိန်ရာမှာ ရှိနိန်စွာမှာတောင်၊ ကဗာကြီး လီထုထဲမှာ အောင်ဆီဂျင် များလာစွာက လွန်ခရေ နှစ်သန်းပေါင်း ၂,၃၀၀ ကမှပါ။ အရိုးရှိရေ ကုန်းသတ္တဝါတိ စဖြစ်လာစွာ လွန်ခရေ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၈၀ ကပါ။ လွန်ခရေ နှစ် ၄.၆ သန်း နန့် ၆.၂ သန်း ကြားလောက်ကျမှ လူဖြစ်ဖို့ မျိုးစိတ် ဟိုမို ဆာပီရန်းဆ် (Homo sapiens) တိ စဖြစ်လာပါရေ။ လက်ရှိ လူပုံစံတိက လွန်ခရေ နှစ် ၃ သိန်းက အာဖရိကတိုက်မှာ ပထမဆုံး စဖြစ်လာပါရေ။ လက်ရှိ လူတိ အပြုအမူကို လွန်ခရေ နှစ် ၅ သောင်းကျမှ စပြုမူလာကတ်ပါရေ။
လူတိ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးတတ်ကတ်စွာက လွန်ခရေ နှစ် ၁ သောင်းနန့် ၅ ထောင် ကြားမှာပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံထဲက ပထမဆုံး ဂူအောင်း လူသားကို ကာဘွင်နဲ့ တွက်ကြည့်ရေခါ လွန်ခရေ နှစ် ၁ သောင်းကလို့ သိရပါရေ။ ယင်းလူစွာ အသားမဲပနာ၊ ဆံပင်ကောက်တုန်းပါ။
လက်ရှိခုနှစ်သက္ကရာဇ်တိကို စမရွီတွက်ခင်၊ ၈ ရာစုနန့် ၆ ရာစုကြားကို ဝင်ရိုးခေတ်(Axial Age)လို့ ခေါ်ပနာ၊ ယင်းကာလတိမှာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်တေ ဒဿနိက အတွေးအခေါ် တိ(philosophical ideas) နန့် ဘာသာရေး အတွေးအခေါ် တိ(religious ideas) ထွန်းကားလာပါရေ။ အဂုသက္ကရာဇ် မစခင် ၆ ရာစုလောက်(လွန်ခရေ နှစ် ၂၆၀၀ လောက်)မှာ တရုတ်လူမျိုး ကွင်ဖျူးရှပ်ဝါဒ(Chinese Confucianism)၊ အိန္ဒိယလူမျိုး ဗုဒ္ဓဝါဒ နန့် ဂျိန်းဝါဒ (Indian Buddhism and Jainism)၊ ဂျူးလူမျိုး မိုနိုသီဆိန်ဝါဒ (Jewish monotheism)ရို့ စထွန်းကားလာပါရေ။
လက်ရှိသက္ကရာဇ် ၁၇၆၀ ခုနှစ်ကနိန် ၁၈၂၀ ခုနှစ် ကြားလောက်မှာ ကျမှ၊ လူတိစွာ လက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းက၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကို အသွင်ကူးပြောင်းလာပါရေ။ အေ ၂၀ ရာစု(၁၉၅၀ နှစ်နောက်ပိုင်း)ကို ရောက်မှရာ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်(တတိယစက်မှုခေတ်)(Digital Revolution (also known as the Third Industrial Revolution))ကို ရောက်လာပါရေ။
အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ ကဗာကြီး ဇာပိုင် ဖြစ်လာရေ။ လူတိ ဇာပိုင် အစပျိုးလာပနာ၊ လူတိ ဇာပိုင် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာလဲဆိုစွာ အကြမ်းဖျင်းသဘောပေါက်ဖို့ ထင်ပါရေ။ အယင်လူတိက လက်ရှိ လူတိထက် ပိုပနာ တော်လား၊ စွမ်းပကား ပိုရှိလားဆိုစွာ စကေ သဘောပေါက်လားဖို့ ထင်ပါယင့်။ လူတိစွာ ထပ်တလဲလဲ သံသရာ လည်နိန်စွာလား၊ အေဘဝကို နောက်ဘဝတိကို ထပ်တလဲလဲ ပြန်သယ်နိန်ဖို့လားဆိုစွာတိလည်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိဖို့ ထင်ပါယင့်။
အမှန်က လက်တွိကဗာမှာ မဟာလူသား ဆူပါမန်းဆိုစွာ မရှိပါ။ လူတိ တင်စားမြှောက်ပင့်ယင်း ချဲ့ကားထားစွာမျိုးပါရာ။ လူတိ ကြိုးစားကတ်ပနာ အတွိအကြုံတိကို ထပ်ဆင့် စုဆောင်းကတ်ယင်း၊ အတွေးအခေါ် ပိုရင့်သန်လာဗျာလ်၊ ပုံမှန် လူတိထက် ပိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်စွာမျိုးရာ ရှိပါရေ။ လူမျိုး တမျိုးနန့် တမျိုးကြားမှာ မိုးနန့်မြေပိုင် မူလ ဉာဏ်ရည်က ကွာခြားစွာမျိုးလည်း မရှိပါ။ အသိဉာဏ်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ထပ်တလဲလဲ တည်ဆောက်လားကတ်ယင်း ကွာခြားလားစွာမျိုးရာ ရှိပါရေ။
အေနိန်ရာမှာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှု မရှိဘဲ၊ မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်ထားကတ်တေ ဘာသာရေးအကြောင်းအရာတချို့ကို တင်ပြပီးပါမေ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ဆူပါမန်းပိုင် မမြင်ဘဲ၊ သာမန် လူသားတယောက် အနိန်နန့် မြင်အောင် ရှုဒေါင့်တခုက တင်ပြပီးပါမေ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစွာ လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ မဖြစ်ခင်၊ အိန္ဒိယတိုက်ထဲက ကျွန်းပင်တိ ထူထူထဲထဲ ပေါက်နိန်ရေ တိုင်းပြည်ချေတခုကို အုပ်ချုပ်ခရေ ရှင်ဘုရင်တပါး သားတော်ပါ။ ယင်းအတွက်နန့် ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပုံလွှာကို ဗြီးမြင်ဖို့ဆိုကေ၊ မူလမွီးဖွားခရေ ဒေသဝန်းကျင်က အိန္ဒိယလူမျိုးတိ ရုပ်ပုံလွှာကို ဗြီးမြင်တတ်ဖို့ လိုပါရေ။ ကိုယ့်စွာကိုယ် စိတ်ကူးယဉ်ပနာ ဆွဲတွေးမြင်လို့ မမှန်နိုင်ပါ။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပုံလွှာစွာ ကိုယ်ရို့လူမျိုးရုပ်ပုံစံမျိုး မရှိနိုင်ပါ။ အမိကလည်း ကပ်ရပ်တိုင်းပြည်ချေတခုကပါ။ လူမျိုး/ဇတ် မတူလို့ နိုင်ငံခြားစာတချို့မှာ ဖတ်ဖူးပါရေ။ ဗုဒ္ဓအလောင်းအလျာကို မွီးခါနီး အမိအဖဘားမှာ မွီးဖို့လားယင်း လမ်းမှာ မွီးစွာပါ။ အရွယ်ရောက်လာခါ ဘုရင့်သားတော်အလျှောက် အပျော်အပါးတိ ကကောင်း မက်ပနာ၊ မမက်တိနန့် ကကောင်း ရှုပ်ပွီခရေလို့ အိန္ဒိယစာပီတိမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။ နောက်ပိုင်း အပျော်အပါးတိကို ငြီးငွေ့လာဗျာလ်၊ အမှားအမှန်တိကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်လာပနာ၊ သူများတိ မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်လက်ခံထားကတ်စွာကို အမှားအမှန် ကွဲကွဲပြားပြား မြင်တွိလာအောင် ထောက်ပြဟောကြားခစွာပါ။ ယင်းအတွက်နန့် နိုင်ငံခြားသား စာပီပညာရှင်တိက ဗုဒ္ဓကို ဒဿနိက အတွေးအခေါ်ပညာရှင်လို့ သတ်မှတ်ကတ်ပါရေ။
နောက်တခါ ပါဋိအကြောင်း အတိချေ ရှင်းပြပါမေ။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခရေ ပါဋိတရားတော်ဆိုစွာ အမှန်တကယ် မရှိပါ။ မြတ်စွာဘုရားနန့် ပါဋိတရား တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှု မရှိပါ။ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူခစွာက နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော်လားပါဗျာလ်။ ပါဋိဘာသာစကားကို အေဒီ ၅ ရာစု အလယ်လောက်နန့် ၆ ရာစု အလယ်လောက် ကြားထဲမှာမှ စတွိစွာပါ။ အထူးခြားဆုံးက မူရင်းတွိရေ နိန်ရာစွာ မြန်မာပြည်က ပျူမြို့ပြနိုင်ငံဟောင်း အထဲမှာပါ။ ပါဋိဘာသာစွာ ဗုဒ္ဓ မွီးရပ်မြေ ဘာသာစကားတမျိုး မဟုတ်တေပိုင်၊ ဗုဒ္ဓ ပရိတ်နိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ပေါင်း ၁ ထောင်ကျော်မှ ပေါ်လာရေ ဘာသာစကားတမျိုးလည်း ဖြစ်နိန်ပါရေ။ ပြောဖို့ဆိုကေ ပါဋိဘာသာစွာ ဗုဒ္ဓ ဟောခရေ တရားတော်တိကို မှတ်တမ်းတင်ခရေ အစောဆုံး ဘာသာစကားတမျိုးရာ ဖြစ်ပါရေ။ ဗုဒ္ဓ ပရိတ်နိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ပေါင်း ၁ ထောင်ကျော် ကြာခါမှ ပြန်မှတ်တမ်း တင်စွာဖြစ်လို့၊ ပါဋိမှတ်တမ်းတိုင်းစွာ ဗုဒ္ဓဟောကြားခရေ တရားတော် မူရင်းအတိုင်း ဖြစ်တေလို့ ဇာသက်ရှိလူသားလည်း မပြောနိုင်ပါ။ ဗုဒ္ဓ ဆိုလိုရင်းအတိုင်း တသွေမတိမ်း အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားစွာလို့လည်း၊ ဇာလူသားလည်း အာမ မခံနိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါဋိဘာသာကို လေ့လာရေ လူပေါင်း သန်းချီပနာ ရှိနိန်ကေလည်း၊ ပါဋိသာသာ သမိုင်းကြောင်းကို ခြီရာခံ လိုက်ရှာရေ လူက ရှားပါရေ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ပါဋိသမိုင်းနန့် ပါဋိဘာသာကို လေ့လာရေအသင်း ရှိပါရေ။
နောက်ဆက်စပ် ပြောချင်စွာ တခုက စိတ်ဓါတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်စွာနန့်၊ အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်စွာ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဆိုစွာပါ။ တရားထိုင်စွာက စိတ်ဓါတ် တည်ငြိမ်မှုကို တည်ဆောက်စွာပါ။ တရားထိုင်နိန်လို့ အသိဉာဏ် မဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါ။ ၆ နှစ် တရားထိုင်စွာနန့် အကြောင်းအရာတိုင်းကို အကြားအမြင် ပေါက်လားရေဆိုရေ အယူအဆက တွေးတောတတ်တေ လူသားတိအတွက် ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲပါရေ။ ဥပမာ ဖုန်းတလုံးကို ကြည့်လိုက်စွာနန့် အထဲမှာ ပါရေ Chip တခုချင်းဇီ ဇာပိုင် အလုပ် လုပ်နိန်ရေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုတ်တိ သန်းပေါင်းများစွာ ဇာပိုင် အလုပ် လုပ်နိန်ရေဆိုစွာကို အေကဗာထက်က ဇာလူသား ၁ ယောက်လည်း အတိအကျ သိနိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါ။ ဇာဆူပါမန်းလည်း မသိနိုင်ပါ။ ဖုန်း ၁ လုံးကို လူ ရာပေါင်း၊ ထောင်ပေါင်းများစွာက သူ့အပိုင်းနန့်သူ တည်ဆောက်ကတ်ပနာ၊ နောက်ဆုံးမှ ပေါင်းစပ်ပလိုက်စွာပါ။ ဖုန်း SoC(system onachip) တခုကို နားလည်ဖို့အတွက်၊ အနည်းဆုံး ၁၅ နှစ် အသေးစိတ်လေ့လာဖို့ လိုပါရေ။ အေဟင့်တောင် ဖုန်းထဲက အစိတ်အပိုင်းချေ တခုရာ ရှိပါသိမ့်ရေ။ ကဗာကြီးမှာ ဒဲလ်ဂျစ်တဲလ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဟားဒ်ဝဲလ်၊ နြူးကလီးယား၊ ဆီးဝါး၊ ဗိုင်းရာ့ဆ်ဗေဒ၊ အာကာသဗေဒ၊ သတ္တုဗေဒ အစရှိရေ ဘာသာရပ်ပေါင်း မရီမတွက်နိုင်အောင် ရှိပါရေ။ အဆုံးသတ် မရှိရေ ဘာသာရပ်တခုတည်းကိုတောင် ကျွမ်းကျင်အောင်အတွက်၊ လူ့တဘဝနန့် လေ့လာဖို့ မလုံလောက်ပါ။ ယင်းအတွက်နန့် လူတိ ချဲ့ကားပနာ အမွန်းတင်ထားရေ တချို့ အယူအဆတိစွာ အခြေအမြစ် မရှိပါ။ ကိုယ်တိုင် မဆန်းစစ်မိဘဲ မျက်စိဇွတ်မှိတ်ပနာ ယုံကြည်နိန်ကတ်စွာမျိုးတိ ဖြစ်နိန်တတ်ပါရေ။
တရုတ်နိုင်ငံစွာ ၂၀၂၈ ခုနှစ်လောက်မှာ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်ပနာ၊ ကဗာမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့လို့ နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတခုမှာ တွိမိပါရေ။ တရုတ်နိုင်ငံစွာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်ကမှ စပနာ အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်ရေအတွက်၊ နှစ် ၄၀ အတွင်းမှာ ဆင်းရဲရေအဆင့်ကနိန် ကဗာ့ထပ်တန်းကို ဇာပိုင်တရိပ်ရိပ် တက်လာအောင် လုပ်လာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ တရုတ်လူမျိုးအများစုက လက်တွိလုပ်ရပ်နန့် ရလာဒ်ကိုရာ စိတ်ဝင်စားကတ်ပနာ၊ လူတိုင်း အလုပ်လုပ်ရဖို့ဆိုရေ ကွင်မြူနစ်ဝါဒကို လက်စွဲ ကိုင်ထားကတ်ဗျာလ်၊ ဘာသာမဲ့တိ များပါရေ။
တရုတ်ခေါင်းဆောင်တိက နိုင်ငံရေး အယူအဆ လွှမ်းမိုးမှုထက်၊ ဘာသာရေးအယူအဆ လွှမ်းမိုးမှုက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းရေလို့ လက်ခံထားကတ်ပါရေ။ တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်း ဝီးလံခေါင်သီရေဒေသထဲက တိဗက်လူမျိုးတိစွာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကကောင်းသက်ဝင်ယုံကြည်ကတ်ပနာ၊ လက်ရှိဘဝထက်၊ နောက်ဘဝကိုရာ ပိုအလေးထားကတ်ပါရေ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိဘဲ၊ ကကောင်းဆင်းရဲကတ်ပါရေ။ ကျန်းမာရေးကိုတောင် ဂါထာမန္တန်တိ ရွက်ပနာ ကုသတတ်ကတ်ပါရေ။ အဂု တရုတ်အစိုးရက နှစ်ရည်စီမံကိန်းတိ ချပနာ၊ လက်ရှိဘဝကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့၊ လူတိုင်း အလုပ် လုပ်ဖို့၊ ပညာတိသင်ပီး၊ အလုပ်အကိုင်တိ ဖန်တီးပီးမှရာ၊ လူနိန်မှုဘဝ မြင့်မားလာပနာ တိဗက်လူမျိုးတိ အမြင် ပြောင်းလဲလာပါရေ။ အယင် အတွေးအခေါ်က ရလာဒ်နန့်၊ လက်ရှိအတွေးအခေါ် က ရလာဒ်တိကို ကောင်းကောင်း နှိင်းယှဉ်ပနာ နားလည်သဘောပေါက်လာကတ်ပါရေ။
၂၁ ရာစုမှာ မြေမြင်ကနိန် လကဗာထက်က စက်ပစ္စည်းတိကိုတောင် ဆံခြေမျှင်အကွာအဝီးလောက်ထိ ထိန်းချုပ်လာနိုင်ကတ်ပါဗျာလ်။ လီထဲမှာ အသံထက် ပိုယင်အောင် ပျံနိန်ရေ ဒုံးကျဉ်ကိုတောင်၊ လီထဲမှာ ပြန် ပစ်ချနိုင်ရေအဆင့်ကို ရောက်လာပါဗျာလ်။ အဂု စလာရေ ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်(5G)မှာ လူမပါရေ တက္ကဆီကားတိ၊ လူ မပါဘဲ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေ စက်တိ၊ လူ မရှိရေ အထည်ခြုပ်စက်ရုံတိ၊ လူ မပါရေ တိုက်ခိုက်ရေး လီယာဉ်ပျံတိ၊ အလျှိုလျှို ထွက်လာပါဗျာလ်။ အေအသိဉာဏ်တိကို မှီဖို့အတွက်တောင် အဂုမှ စပနာလေ့လာဖို့ဆိုကေ၊ ရခိုင်သားတိ နှစ် လေးငါးဆယ်လောက် အချိန်ပီးဖို့ လိုနိန်ပါဗျာလ်။
ယင်းအတွက်နန့် ရခိုင်သားတိ အယင်ဆုံး လုပ်ရဖို့စွာက စိတ်ဓါတ်တော်လှန်ရေး ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကို အယင်ဆုံး တော်လှန်ကတ်ပါ။ ကိုယ့်စွာကို မသေချာ မရေရာစွာတိနန့် ဘောင်ခတ်ပနာ မကာထားကတ်ဘဲ၊ အပွင့်လင်းဆုံးနန့် အဆုံးစွန်ထိ တွေးတောကတ်ပါ။
အရာရာကို လက်တွိလုပ်ရပ်တိက ရလာရေ အချက်အလက်တိကို အခြေခံပနာ ဆင်ခြင်သုံးသပ် လက်ခံပါ။ ဇာလုပ်လုပ် အပြုသဘောနန့် အတိကျဆုံး ဖြစ်အောင် လက်တွိ လုပ်ကတ်ပနာ၊ အတွိအကြုံကို တိုးချဲ့ကတ်ပါ။ ကံကျ လုပ်တေ လုပ်ရပ်မျိုးကို စွန့်လွတ်ကတ်ပါ။ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ရေ အသိဉာဏ်နန့် အတွိအကြုံ ရလာနိုင်ရေ လုပ်ရပ်မျိုးတိကို ဦးစားပီး ရွီးလုပ်ကတ်ပါ။ အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေ စာတိကို အငမ်းမရ စားသုံးကတ်ပါ။
ကဗာကြီးထက်မှာ လူအပါအဝင် တခြား မျိုးစိတ်တိ အများကြီး ရှိပါရေ။ လူ သဘောကိုက ငါး၊ ပဇွန်၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွား အစရှိရေ တခြားမျိုးစိတ်တိကို အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်စားသုံးဗြီးမှရာ အသက်ရှင်နိန်ရရေ ဖြစ်တေအတွက်၊ လူ လူချင်းကြားမှာ သူတော်စင်လို့ ပြနိန်စရာ အကြောင်းကိုက တခုလည်း မရှိပါ။
နိုင်ငံအချင်း၊ လူမျိုးအချင်းချင်းလည်း သူ့ထက်ငါ အသိဇီးရဖို့အတွက် မြင်ရစွာတမျိုး၊ မမြင်ရစွာတမျိုး၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံနန့် ကြိုးပမ်းနိန်ကတ်စွာပါ။ ကိုယ့်ထက်သာလားဖို့ အခြေအနေမျိုးကို တခုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၊ တခု လူမျိုးကလည်း ပံ့ပိုးပီးလားဖို့ မဟုတ်ပါ။ သူရို့နန့် လက်တွဲနိန်နိုင်ကေတောင်၊ အသာစီးက ရှိနိန်နိုင်အောင်ရာ နည်းမျိုးစုံနန့် ကြိုးပမ်းကတ်ပါဖို့။ တတ်နိုင်ကေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အသုံးမကျလီ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိလီဆိုရေ မူဝါဒကို လက်စွဲကိုင်ထားကတ်ပါရေ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ မတည်ငြိမ်ကေ၊ ယင်းနိုင်ငံထွက်ကုန်တိကို စျီးပပေါနန့် ဝယ်လို့ ရရေအပြင်၊ လူတိကိုလည်း စျီးပပေါနန့် သူရို့ နိုင်ငံထဲမှာ ခေါ်ခိုင်းလို့ရအတွက် အကျိုးအမြတ် အများကြီးရှိနိုင်ပါရေ။ ယင်းအနိန်အထားနန့် တကဗာလုံး လားနိန်စွာကို သတိထားကြည့်ကေ မြင်တွိပါလိမ့်မေ။
လူ့ဘဝဆိုစွာ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားတခုကို ရည်ညွှန်းစွာရာဖြစ်တေဆိုစွာ ရခိုင်သားတိုင်း သတိထားကတ်ပါ။ ယင်းအတွက်နန့် လက်ရှိဘဝမှာ မလိုအပ်စွာတိနန့် ရုန်းထွီးအချိန်ကုန်နိန်ကတ်ဖို့အစား၊ ရလာရေ အချိန်စက္ကန့်တိုင်းကအစ တန်ဖိုးထားကတ်ပါ။ လူသားတိအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုစွာတိကို ရနိုင်အောင် ကြိုးစားကတ်ပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ကနိန် ရခိုင်သားတိုင်း တရိပ်ရိပ် တိုးတက်လာရေ ရခိုင်ပြည်ကို တည်ဆောက်လားကတ်ပါမေ။
(အထက်မှာ ပြခရေ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို အားကျပနာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခွာဖို့ ပြောစွာ မဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မမှန်ကန်လို့ ပြောစွာ မဟုတ်၊ ရခိုင်လူမျိုးတိ အရေးမကြီးစွာတိနန့် ထွီးလုံးအချိန်ကုန်နိန်ကတ်လို့ အရေးကြီးစွာတိမှာ အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျလားဗျာလ် သူများနောက်မှာ ကျန်ခဗျာလ်ဆိုစွာကို မြင်သာအောင် ထောက်ပြစွာမှန်း သဘောပေါက်ကတ်လိမ့်မေလို့ ထင်ပါယင့်။ အချိန်လု ရွီးရစွာဖြစ်လို့ ဖတ်ရ မပြေပြစ်ကေ တောင်းပန်ပါရေ။)
အထက်မှာ ပြောခရေ အကြောင်းအရာတိကို ထပ်ဆင့် လေ့လာချင်ရေ လူတိအတွက် အောက်မှာ လိင့်ခ်တိ ပီးထားပါရေ။
Previous article၂၀၂၁ ခုနှစ်စွာ ကုလသမဂ္ဂသမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး အငတ်ဘေးကတ်နှစ် ဖြစ်လာဖို့
Next articleကဗာကြီး တခေတ်ဆန်းဖို့ 2nm chip ကို IBM တွိ